Nohavaozina farany tamin'ny 19 Oktobra 2020 tamin'ny 17:50 hariva tamin'i pistouri. Ny Adobe Flash Player Shockwave dia hofongorana ho amin'ny tsara amin'ny taona 2020. Ny antony mahatonga ny fihenany. voakitika matetika ny plugin ...
Lalao Casino Iray Tokony hilalaovana Misy be foana ny tsy fitovian-kevitra rehefa manapa-kevitra ny amin'ny lalao casino izay tokony lalaovin'ny olona iray - satria io no tsara indrindra. Tsy mora indrindra akory ireo karazana fanapahan-kevitra ireo…
Gamble Feature amin'ny Slots nohazavaina Ny lalao filokana dia efa amina lalao filokana nandritra ny am-polony taona maro ary endrika nalaza tokoa izay mahatonga azy ireo hahafinaritra kokoa ho an'ny mpilalao ary mety hahazoam-bola bebe kokoa koa! Ny endri-javatra dia tena tsotra…
Fomba fanovana ny fitenin'ny volana volontany - toro-hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 08:21 maraina avy amin'i pistouri. Pale Moon dia niavian'ny Firefox amin'ny kinova 32 na 64 Bits. Mametraka Pale Moon Locale Switcher. Hamafa ny zava-drehetra ao amin'ny bara adiresy ...
Sarin'ny rantsantanana tsy hita ao amin'ny Windows 10 Explorer - toro-hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 07:06 maraina avy amin'i pistouri. Thumbnail misy sary izay tsy aseho amin'ny Windows 10 Explorer Indraindray, tsy miseho ireo sary kely (thumbnails) ...
Hafatra Firefox "Tsy afaka hampakatra XPCOM" - toro-hevitra
Nohavaozina farany tamin'ny 1 Oktobra 2020 tamin'ny 21:00 alina avy amin'i pistouri. Ny "lesoka tsy hita xpcom tsy hita" dia olana hatrany amin'ireo fisie ao amin'ny lahatahiry programa Firefox ary matetika dia vokatry ny ...
Asehoy loko eo am-panombohana, ao amin'ny bara fanaovana ary ao amin'ny safidin'ny Center…
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 08:31 maraina an'i pistouri. Ny kinova farany an'ny Windows 1909 dia miaraka amin'ny lohahevitra maivana vaovao mampiseho ny tsipika fiasana, ny menio fanombohana, ny afovoany ...
Hadisoana ny famindrana tranomboky na lahatahiry mankany amin'ny kapila na fizarazarana hafa. - ...
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 08:35 an'i pistouri. Raha nanao hadisoana ianao tamin'ny famindrana ny tranombokin'ny My Documents, Pictures, Music and Videos amin'ny hafa ...
Fahadisoana 0xA00F425C, 0xA00F424F, 0xA00F4243,0xA00F4246 Fakantsary sy fakan-tsary - Soso-kevitra
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 08:40 maraina avy amin'i pistouri. Matetika, ny kaody hadisoana dia aseho miaraka amin'ireto hafatra hadisoana manaraka ireto: "Akatony ny fampiharana hafa." Toa nisy ...
Atsaharo ny tooltip rehefa mihodina eo amin'ny tab Google Chrome - Torohevitra
Nohavaozina farany tamin'ny 2 Oktobra 2020 tamin'ny 08:43 maraina avy amin'i pistouri. Raha vao nanavao ny Google Chrome 78 ianao, rehefa ampidirinao amin'ny takelaka ny kursor ny totozy, dia ho hitanao izao ...